Thursday May 12, 2022 - 08:06:32
Dowladda Itoobiya ayaa weli sii wada qorshaha ay ku howlgelineyso biyo xireenka weyn ee An-nahda, kaasoo ay ka dhistay webiga An-niil qeybta uu ka maro dalka Itoobiya, waxaana tallaabada biyo xireenkaas ay ku dhistey illaa biyo buuxinta hadda ku socota uu dhaliyay muran caalami ah, gaar ahaan xiisad ka dhex taagan dowladaha Itoobiya, Suudaan iyo Masar.
Labo jeer oo hore, dowladda Itoobiya waxay ku guuleysatay iney biyo ku shubto biyo xireenka An-Nahda, si uu billaabo dhalinta tamarta korontada, waxaana lagu soo waramayaa in haddii ay u suuragasho in mar saddexaad ay buuxiso ay ka dhigantahay awood biyo oo ka dhigan mida nuclearka oo ay gacanta ku dhigtay dowladda xabashida ah ee Itoobiya.
Khabiir ku takhasusay qawaaniinta caalamiga ah ee la xiriira xaga biyaha, laguna magacaabo Dr Axmed Al-Mufti ayaa sheegay in saameyn togan ay ku yeelan doonto caalamka siiba dowladaha Masar iyo Suudaan, haddii dowladda Itoobiya ay u suuragsho in mar sadexaad ay biyo ku shubto biyo xireenka An-Nahda, iyadoo isticmaaleyso biyaha webiga An-Niil.
" Cawaaqib aad u xun ayay ku yeelan doontaa Masar iyo Suudaan, haddii mar sadexaad dowladda Itoobiya ay biyo ku shubto biyo xireenka An-nahda, taasoo ka dhigan in dowladda Itoobiya ay heysato bam nuclear oo biyo ah” ayuu yiri Dr Axmed Al-Mufti oo ah khabiir xaga biyaha ah.
Natiijada ka dhalata tallaabadaas ayuu sheegay Dr-kan iney tahay mid musiibo ah, marka loo fiiriyo Masar iyo Suudaan, maadaama qaadka biyo xireenka uu gaarayo 18 bilyan oo metar sadex jibaaran.
Biyo xireennada Suudaan iyo Masar ku yaala ayuu tilmaamayaa khabiirkan iney noqon doonaan kuwa biyo yareeya, taas bedelkeedana aysan soo saareynin wax soo saarkii xaga korontada iyo manaaficda kale ee la xiriirta, illaa iyo hadana wuxuu ku doodayaa Axmed Al-Mufti in dowladaha Suudaan iyo Masar aaney qaadin wax tallaabo ah oo muuqata.
Sida uu tilmaamayo ninkaan, haddii dowladda Itoobiya ay buuxiso mar sadexaad biyo xireenka An-Nahda, waxay noqon doontaa awood adag, umana baahna xitaa iney wadahadallo gasho, Masar iyo Suudaan ayaana ku qasbanaan doona iney u hogaansamaan awaamiirta Adis Ababab, maadaama uu mugdi galayo masiirka labadaas dal ee xaga nolosha, maadaama bulshada labadaas dal ay aad ugu tiirsanyihiin biyaha webiga An-Niil.
Bisha July ee soo socota ayuu tilmaamay Dr Axmed AL-Mufti iney tahay waqtiga la filayo in dowladda Itoobiya ay qaado tallaabada ay mar sadexaad ku buuxineyso biyo xireenka An-Nahda, markaas oo uu sheegay iney tahay waqti aaney Masar iyo Suudaan waxba u tari doonon hadal iyo qeyla dhaan afka ah, maadaama rajadii ugu dambeysay ee Itoobiya ay dhab noqotay, marka laga hadlayo qadiyadda wbiga An-Niil, oo muran sadex geesood ah ka dhex dhaliyay Itoobiya, Suudaan iyo Masar.
Arinta la yaabka leh ee uu tilmaamayo Dr Axmed Al-Mufti oo ah khabiir xaga biyaha ah waxay tahay in dowladda Itoobiya ay biyaha webiga ka iibin doonto Masar iyo Suudaan, marka ay qaado tallaabada sadexaad ee ay ku buuxineyso keydka biyo xireenka An-nahda, taasoo ka dhigan cadaadis horleh oo soo wajaha dalalka Masar iyo Suudaan.
Dowladda Itoobiya ayaa hiigsiga biyo xireenka An-Nahda waxay ku tilmaamtay iney tahay in dalka uu yeesho il dhaqaale oo xaga korontada ah, dabna ay siiso wadamada Africa, balse Al-Mufti wuxuu tilmaamayaa iney jirto dano kale oo siyaasadeed oo ay Adis Ababa ka leedahay arinta biyo xireenka An-Nahda.
Wuxuu sheegay in dowladda Itoobiya dooneyso in biyaha webiga ay ka iibiso wadamada Masar iyo Suudaan, markaas oo ay yeelan doonto awood ay ku maamusho qaraarka siyaasiga ah ee labadaas dal, maadaama waxa ugu muhiimsan xaga nolosha oo ah biyaha ay Itoobiya isbaaro u dhigatay.
Wuxuu intaa ku daray in maamulka Yahuudda uu maalgashi ku sameeyay biyo xireenka An-nahda, dowladda Itoobiyana kala shaqeynayo arinkaas, isagoona Dr-ku tilmaamay in qorshuhu yahay in dabka laga dhaliyo biyo xireenka la gaarsiiyo wadamo ka baxsan Africa, sida dhulka Filastiin ee ay Yahuuddu xooga ku heystaan.
Tallaabada wejiga saddexaad ee buuxinta keydka biyo xireenka An-Nahda, waxay kaloo ka dhigantahay sida uu sheegayo khabiirkan in reer Itoobiya ay markii ugu horeysay dhadhamin doonaan natiijada biyo xireenka An-nahda, maadaama wixii hadda ka horeeyay aaney wax natiijo ah weli arkin, keliyana ay mustaqbal ahaan u shaqeynayeen.
Dowladda Itoobiya ayaa weli sii wada ballaarinta biyo xireenka An-Nahda, wararkan oo dhawaanahan soo baxay ayuu Axmed Al-Mufti sheegay iney dhab yihiin, islamarkaana Itoobiya billowday iney sii ballaariso biyo xireenka, hareerihiina ka dhisto goobo waasac ah oo lagu keydin karo biyo horleh, halka la billaabay in la nadiifiyo biyo xireenka, geedaha iyo qashinkana laga saaro, si loogu shubo biyo aad u tiro badan.
Mar wax laga waydiiyay Axmed Al-Mufti sheegashada Itoobiya ee ah in weerar xaga Internetka ah lagu soo qaaday qalabyada computerka ee wasaaradda Maaliyadda Itoobiya ee gacanta ku heyso mashruuca biyo xireenka AN-Nahda, ayuu tilmaamay inuusan ka warheynin arinkaas.
Dhawaan, ayaa maamulaha amniga xogaha ee dowladda Itoobiya wuxuu sheegay in weerar xaga Internetka ah lagu beegsady 37 kun oo Computer oo laga hago howsha ka socota biyo xireenka AN-Nahda ee ay dowladda Itoobiya ka dhistay webiga An-Niil.
Marka laga hadlayo wadahadallada dhexmari kara Itoobiya oo dhinac ah iyo dalalka Suudaan iyo Itoobiya, wuxuu sheegayaa khabiirka ku takhasusay arimaha biyaha ee Axmed Al-Mufti lagu magacaabo in wadahadal kasta oo aan shardi ka dhigin in Itoobiya joojiso hab dhaqannada kelinimada ah uu sii sharciyeynayo tallaabada dowladda Itoobiya ay halista ku gelineyso shucuubta Suudaan iyo Masar.
Wuxuu sheegay in wahadalaladii dhacy wixii ka dambeeyye tallaabooyinkii koowaad iyo labaad ee ay Itoobiya ku buuxisay biyo xireenka, aaney soo kordhin wax natiijo ah, dowladda Itoobiyana ay sii joogteysay buuxinta biyo xireenka, iyadoo hadda fooda u saaran in markii saddexaad ay buuxiso.
" Wahadal kasta oo dhaca ka hor inta aan la gaarin heshiis rasmi ah, waxay dani ugu jirtaa Adis Ababa, wuxuuna beylah kasii dhigayaa xuquuqda xaga biyaha ee ay leeyihiin dalalka Masar iyo Suudaan” ayuu yiri Dr Axmed Al-Mufti.
Itoobiya waxay dhawaan wasiirkii waraabka, sidoo kalena ahaa dadka ku matalayay wadahadllada biyo xireenka An-Nahda ka dhigtay safiirkeeda u fadhiya dalka Maraykanka, tallaabadan ayuuna Dr Al-Mufti ku tilmaamay iney tahay mid muujineysa sida Itoobiya uga go’antahay iney u difaacato qadiyadda biyo xireenka An-Nahda.
Maadaama qadiyad la xiriirta xuquuqda Aadanaha gaar ahaan xadgudubyadii ka dhacay gobolka Tigrey ay weli taaganyihiin, waxay Itoobiya dooneysaa in mowqifka Washington aanu noqon mid iyada caksi ku ah, sidaas darteed waxay ka dheereysay Masar iyo Suudaan oo aan weli wax tallaabo ah qaadin.
Marka laga hadlayo qaababka lagu joojin karo howsha ka socota biyo xireenka An-Nahda, wuxuu tilmaamay Al-Mufti In Masar iyo Suudaan la gudboontahay iney isticmaalaan siyaasadda adkeynta iyo jilcinta, ama " Al-Casaa wal Jazara”, haddii kalena ay tahay iney si rasmi ah isugu dhiibaan dowladda Itoobiya.
Si Itoobiya loogu qasbo wuxuu sheegay Al-Mufti iney la gudboontahay Suudaan iney ka baxdo heshiiskii ay horey ugu saxiixay Itoobiya dhulka uu ku fadhiyo biya xireenka An-Nahda, tallaabadas oo keeni karta- sida isaga u muuqata- in waxa loogu yeero Golaha ammaanka uu soo farageliyo arinta biyo xireenka An-nahda.
Inkastoo uu taladaas dhiibay, hadana wuxuu AL-Mufti aaminsanyahay inaaney jirin wax dowladda Itoobiya ka hor istaagi kara arinta la xiriirta biyo xireenka An-Nahda, maadaama ay Itoobiyaanka oo dhami ka mideysanyihiin, una arkaan fursad dahabi ah oo dalkooda ka dhigi karta dal leh awood dhaqaale oo ballaaran.
Marka laga hadlo sida say ku biyo shuban doonto xaaladda biyo xireenka An-nahda, wuxuu sheegay Al-Mufti inuu bilaaban doono siraac iyo loolan aan dhamaad lahayn, kaasoo socon doono illaa qiyaamaha, maadaama baahida loo qabo biyaha ay marba marka ka dambeysa sii kordheyso.
" Waxaa imaan doono xasilooni la’aan xaga siyaasadda ah illaa qiyaamaha, maxaa yeeley baahida loo qabo biyaha ay sii kordheysa maalinba maalinta ka dambeysa, illa laga gaarayo heshiisa saddexa dhinacba ay raalli ka noqdaan” ayuu yiri Dr Axmed A-Mufti oo ah khabiir ku takhasusay arimaha biyaha.